Ma Dhab baa in Xukuumadda ay Joojisay Dacwaddii uu ka Gudbiyay Xisbiga HIMILO QARAN - Awdinle Online
Ma Dhab baa in Xukuumadda ay Joojisay Dacwaddii uu ka Gudbiyay Xisbiga HIMILO QARAN
October 20, 2019 (AO) – Xildhibaano ka tirsan labada gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya islamarkaana ku jira xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyaha Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay joojisay dacwaddii uu gudbiyey xisbiga Himilo Qaran.
Xildhibaanadda Xubnaha ka ah Ximilo Qaran ayaa noo sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay joojisay in Maxkmadda Sare ee dalka ay guda-gasho waajibka ka saaran dacwada ay soo gudbiyeen xubnaha xisbiga Himilo Qaran kadib markii laga hor istaagay safar uu magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose ku aadi lahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed inkastoo markii dambe ay u suurta gashay.
“Maxkamadda ugu badnaan 48 saac ayey aheyd in ay guda-gasho kiiskaan sababtoo ah waa ka duwan-yahay dacwadaha kale balse ilaa hadda ma furin waxaana joojiyay Xukuumadda” ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran oo la hadlay Warbaahinta Awdinle Online.
“Dacwadaha nuucaan ah ma qaataan waqti badan 28 Saac ilaa iyo 48 saac ayey aheyd in ay soo saarto go’aan maxkamadda ama ugu yaraan guda-gasho dacwada balse ilaa hadda lama furin doodii aan geynay” ayuu yiri Xildhibaankaan aan la hadalnay islamarkaana ka gaabsaday magaciisa iyo codkiisa.
Waxay aheyd markii ugu horreysay oo ay siyaasiinta Soomaalida qaataan tallaabo ah in sharci lagu kala baxo balse waxay u muuqaataa in albaabkaas cusub ee la furay islamarkiiba la xiray.
In doodaha siyaasiinta lagu xaliyo Sharciga iyo Garsoorka dalka waxay aheyd rajo la sugayay muddo fog, balse waxaa muuqata in ay wali ku hor gudban yihiin caqabado xoog badan oo dhanka Xukuumadda ah.
Si toos ah Hay’adaha garsoorka dalka ayaa laheyn madaxbanaani ay umadda Soomaaliyeed ugu adeegaan waxaana ku dhax-milan hay’adda fulinta Soomaaliya balse ma ahan oo kaliya Xukuumadaan waxayna soo jirtay tan iyo bur burkii dalka.
Previous articleKingdom of Saudi Arabia bans livestock imports from Sudan and Djibouti over RVF fears
Next articleSomaliland Recognition is Significant to Somalia’s Tranquility